ဟဒီးဆ်: ဟဒတ်စ် (ဝူဿွူပျက်ခြင်း)ဖြစ်သွားလျှင် ဝူဿွူပြန်မလုပ်မချင်း အသင်တို့အနက် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ဆွလာသ်ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် လက်ခံတော်မူမည် မဟုတ်ပေ။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ဟဒတ်စ် (ဝူဿွူပျက်ခြင်း)ဖြစ်သွားလျှင် ဝူဿွူပြန်မလုပ်မချင်း အသင်တို့အနက် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ဆွလာသ်ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် လက်ခံတော်မူမည် မဟုတ်ပေ။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု။ . ဝုဿွူပြုခြင်း။ .
အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်တော်ကြားတော်မူသည်။ ဟဒတ်စ် (ဝူဿွူပျက်ခြင်း)ဖြစ်သွားလျင် ဝူဿွူပြန်မလုပ်မချင်း အသင်တို့အနက် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ဆွလာသ်ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် လက်ခံတော်မူမည် မဟုတ်ပေ။
အမြော်မြင်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ဆွလာသ်ဆောက်တည်ရန် ရည်ရွယ်သောသူအား ကောင်းမွန်လှပသည့် အခြေအနေမျိုးဖြင့်သာ ဆွလာသ်ဆောက်တည်ရန် လမ်းညွှန်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆွလာသ်ဆောက်တည်မှုသည် ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် အရှင်မြတ်၏ ကျွန်ကြားတွင် ခိုင်မာသော ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ ဆွလာသ်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် တီးတိုးစွာလျှောက်ထားပြောဆိုသည့် လမ်းလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆွလာသ်ဆောက်တည်ရာတွင် ဝူဿွူပြုရန်နှင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိရန် ၎င်းအား အရှင်မြတ်က အမိန့်ပေးထားတော်မူပြီး သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုမပါရှိသော ဆွလာသ်သည် လက်ခံသဘောတူခြင်းခံရမည် မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးတင်ပြထားသည်။
ဆွလာသ်၏ အဆင့်အတန်းကြီးကျယ်မှုကို တင်ပြထားပြီး ဧကန်အမှန်ပင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုပါရှိသော ဆွလာသ်ကိုသာ လက်ခံတော်မူမည်ဖြစ်မည်။
မသန့်ဖြစ်နေသောသူ၏ ဆွလာသ်သည် မသန့်အကြီး (ရေချိုးရန်တာဝန်ထိုက်သည့်မသန့်ရှင်းမှု)နှင့် မသန့်အသေး ( ဝူဿွူပြုရန် တာဝန်ထိုက်သည့် မသန့်ရှင်းမှု) တို့မှကင်းစင်မှသာလျှင် ၎င်း၏ ဆွလာသ်သည် လက်ခံခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။
မသန့်ဖြစ်ခြင်းသည် ဝူဿွူကိုပျက်စေသည်။ အကယ်၍ ဆွလာသ်အတွင်း၌ မသန့်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဆွလာသ်ကိုပါ ပျက်စေသည်။
ဤနေရာတွင် “လက်ခံခြင်းခံရမည်မဟုတ်”၏ အလိုသဘောမှာ ဆွလာသ်အထမမြောက်ခြင်းနှင့် အကျိုးကုသိုလ် မရရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ဤဟဒီးဆ်တော်မှ သိရှိရသည်မှာ အချို့ ဆွလာသ်သည် လက်ခံသဘောတူခြင်းခံရပြီး အချို့ဆွလာသ်သည် လက်ခံသဘောတူခြင်း မခံရပေ။ သို့ရှိရာ (ရှရီအဟ်)သာသနာ့ပြဌာန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ဆွလာသ်သည် လက်ခံခြင်းခံရပြီး (ရှရီအဟ်)သာသနာ့ပြဌာန်းချက်နှင့် မကိုက်ညီသော ဆွလာသ်သည် လက်ခံခြင်းမခံရပေ။ အခြားခဝပ်ကိုးကွယ်မှုတိုင်းသည်လည်း ဤကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်တော်မူထားသည်မှာ အကြင်သူသည် မည်သည့်အမလ်ကောင်းမှုကိုမဆို ပြုလုပ်ရာတွင် ငါတမန်တော်၏ အမိန့်မပါရှိခဲ့လျှင် ထိုအရာသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဝူဿွူမရှိသောသူ၏ ဆွလာသ်သည် ဝူဿွူ မပြုမခြင်းပိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုကဲ့သို့ ဆွလာသ်မျိုးကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် လက်မခံသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်လက်ခံကဗူလ်ပြုခြင်းမရှိသော အရာနှင့် အရှင်မြတ်ထံသို့ ချဉ်းကပ်ကိုးကွယ်ခြင်းသည် ထိုအရှင်မြတ်အား စိန်ခေါ်မှုပြုခြင်းနှင့် လှောင်ပြောင်ခြင်း တစ်မျိုးသာဖြစ်သည်။
အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် ဆွလာသ်တစ်ကြိမ်ဆောက်တည်ရန် ဝူဿွူကိုယ်လက်သန့်စင်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် နောက်ထပ် ဆွလာသ်ဆောက်တည်ရန် အချိန်ကျရောက်လာပါက ထိုသူသည် ဝုဿွူရှိနေလျှင် နောက်တစ်ကြိမ် ဝူဿွူ ပြုလုပ်ရန် တာဝန်မရှိပေ။
ဝူဿွူ မရှိသောသူသည် မေ့လျော့၍ ဖရဿ်ွဆွလာသ်ကိုဖြစ်စေ၊ နဖ်လ်ဆွလာသ်ကိုဖြစ်စေ ဂျနာဇဟ်ဆွလာသ်ကိုဖြစ်စေ ဆောက်တည်ခဲ့လျှင် လက်ခံခြင်းခံရမည် မဟုတ်ပေ။ ဝူဿွူပြု၍ ဆောက်တည်မှသာ လက်ခံခြင်းခံရမည်။ ထို့အတူ ရေချိုးရန် တာဝန်ထိုက်နေသူသည် ရေမချိုးမီ ဆွလာသ်ဆောက်တည်ခဲ့လျှင် လက်ခံခြင်းခံရမည် မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ မေ့လျော့၍ ဆောက်တည်ခဲ့လျှင်လည်း ထိုဆွလာသ်ကို ပြန်လည်ဆောက်တည်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု။ . ဝုဿွူပြုခြင်း။ .